Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Ihe omume 13 maka mpaghara 13 iji chekwaa Himalayan Tourism
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ogige Tulip dị na Uttarakhand
Steeti ugwu nke Uttarakhand, steeti dị na mgbago ugwu India nke Himalaya gafere, na -ezube imepụta ọrụ njem nlegharị anya 13 na mpaghara iri na atọ ya.
Ebumnuche nke oru ndị a bụ ịkwaga njem nlegharị anya site na ọghọm ndị na-adịghị mma n'ihi COVID-19 gaa na mgbasa nke ndị ọbịa sara mbara ma dị mma.
A na -achọ ego maka ọrụ ndị a site n'aka gọọmentị yana ụlọ ọrụ mmepe onwe.
Dị ka ọ na -eme gburugburu ụwa, njem nlegharị anya na -achọ ugbu a izere mmadụ karịrị akarị na ịnye nhọrọ ndị njem nlegharị anya.
Mpaghara 13 nke Uttarakhand bụ Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri, Udham Singh Ngar, na Uttarkashi. Ogige tulip dị na mpaghara Chamoli na Astro Park bụ ụfọdụ ọrụ ezubere iche.
N'oge na-adịbeghị anya na India, dị ka ọ na-eme ebe ọzọ, ihe gbadoro anya bụ ilele njem nlegharị anya site n'ụzọ ziri ezi wee zere ọnyà ndị gara aga n'ihi COVID-19 na nsonaazụ na mmetụta ya niile. Uttarakhand bụ otu n'ime steeti ọhụrụ lere anya njem nlegharị anya site n'akụkụ niile ka mmetụta nke njem na-adị mma.
Ebumnuche bụ ịgbasa ọrụ ndị a na mpaghara dị iche iche ka enwere ike belata ike njem. Ime ihe ga -enyere aka wepu mkpokọta ndị njem site na ebe ndị dị, dị ka ndị isi ndị njem na -ekwu.
Juergen T Steinmetz ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 8, 2021 na 20:07
Anyị anaghị anabata nkwupụta niile. Okwu gị kwalitere ịgba chaa chaa n'ịntanetị na enweghị akụkọ.